Barnaamijyada & Adeegyada - BullyingCanada
/ Barnaamijyada & Adeegyada
Khadka Nolosha: Shabakadda Taageerada Qaranka
BullyingCanada abuuray 365-maalin-sannadkii, 24-saacadood-maalintii, 7-maalin-isbuucii taageero shabakad taageero ah oo bixisa caawinta wax-ka-beddelka nolosha dhalinyarada iyada oo loo marayo telefoon, sheekeysi online ah, iimaylka, iyo qoraalka.
Adeeggan taageerada waa mid aan la mid ahayn kanada - oo aad uga fog la-talinta caadiga ah ee aan la aqoonsan ee ay bixiyaan hay'adaha kale ee samafalka.
Iyadoo koox ka kooban boqolaal mutadawiciin ah oo ka kala yimid Kanada oo dhan oo si hagar la'aan ah uga shaqaynayay guryahooda, BullyingCanada waxay sahaydaa taageero iyo faragelin si looga hortago oo loo joojiyo cagajuglaynta. Tabarucayaasheena waxa lagu tababbaray la-talinta, ka-hortagga is-dilka, dhexdhexaadinta iyo xallinta mashaakilaadka. Geesiyaashan aqoonsado dhibaatooyinka iyo xaliya- joojinta cagajuglaynta iyo ka hortagga dib u soo noqoshada.
Waxay tan ku sameeyaan iyagoo si qoto dheer, wada hadal mid-ka-mid ah ula yeelanaya dhallinta la xoogsheegtay iyo qoysaskooda; cagajuglaynta iyo waalidkood; Macalimiinta, la-taliyayaasha, maamulayaasha, iyo shaqaalaha guddiga dugsiga; adeegyada bulshada ee deegaanka; iyo, marka loo baahdo, booliska deegaanka. Hadafkayagu kama dambaysta ah waa in aan soo afjarno dhaawacyada carruurta la xoogsheegtay ay la kulmeen, oo aan helno daryeelka la-socod ee lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si loo bogsiiyo.
Caadi ahaan, BullyingCanada si firfircoon ugu lug lahaanshiyaha laba ilaa saddex toddobaad, laakiin xaalado aad u adag ayaa u baahday taageero bilo ama sannad ama ka badan si loo xalliyo. Ma quusanno ilaa carruurta la xoogsheegtay ay badbaadaan oo ay u gudbin karaan mustaqbal ifaya.
Abuurista maskax furan iyo ilaalinta carruurta
Waxa dheer in dugsiyada iyo ururka bulshada la siiyo boodhadhyo, buug-yaro, iyo agab kale oo waxbarasho, BullyingCanada, iyadoo hoos timaada jihada Rob Benn-Frenette, ONB, waxay sidoo kale bixisaa aqoon-is-weydaarsiyo kooxo kala duwan.
Aqoon-is-weydaarsiyadani waxay awood siinayaan dhalinyarada iyo hoggaamiyeyaasha bulshada inay si wax ku ool ah ula dagaallamaan cagajuglaynta oo ay u siiyaan habab cusub oo ay wax uga qabtaan arrimaha soo wajaha noloshooda oo dhan.
Xoojinta Madaxda Dhalinyarada
Barnaamijka Waxbarasho ee Qaranka ayaa la bilaabay 2013 si dib loogu celiyo dhalinyarada, iyada oo kuwa qaadan kara ay soo magacaabeen shaqaalaha dugsiga. BullyingCanada aqoonsan baahida loo qabo in la beero hoggaamiyeyaasha bulshada ee qiirada leh, wuxuuna sameeyay barnaamij deeq waxbarasho oo heer qaran ah si uu u bixiyo deeqaha waxbarashada dugsiga sare kadib.
Deeqaha waxbarasho ayaa awood u siinaya dhalinyarada noqda hoggaamiyeyaasha bulshada wax ka qabta cagajuglaynta dugsiyada.
Ilmo Laga Heli Lahaa
Tan iyo 2006, BullyingCanada ayaa qaranku lahaa go-to ururka marka ay timaado dadaallada ka hortagga cagajuglaynta. Runtii, waxaanu ahaanaynaa ururka kaliya ee samafal qaran oo la shaqeeya dhalinyarada Kanadiyaanka, qoysaskooda, iyo bulshooyinkooda, iyagoo siinaya taageero hal-hal-hal-dheer ah, agab, iyo macluumaadka lagama maarmaanka u ah ka hortagga rabshadaha cagajuglaynta iyo ilaalinta ubadkeena ammaan.
Waxaan ku faanaa inaan siino carruurta jilicsan ee jilicsan taageerada ay u baahan yihiin, ballaarinta barnaamijyadayada si aan uga hortagno rabshadaha oo aan u hubinno badbaadada carruurteena.
BullyingCanada waxa uu si hagar la'aan ah uga shaqeeyaa in uu u doodo magaca dhalinyarada dhibanayaasha ah ee cagajuglaynta dalka oo dhan — dhisitaanka mustaqbal ifaya oo cadaalad ah dhalinyarada la xoogsheegtay iyo bulshadooda.